ခင်သာဇာတိ မောင်သာဂိ(၆) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ခင်သာဇာတိ မောင်သာဂိ(၆)
Posted by Nan Shin on Sep 15, 2011 in Creative Writing |4comments
ယောက်မကြီးဆိုသူကအဲ့သလိုမွှေတက်သူ။ ယခုအဘချိုကိစ္စမှာလည်း ၄င်းကမွှေဖို့ ကြိုးစားပြန်လေပြီ။ ယောက်မကြီးက ရွာထဲ သို့အရင်ဦးအောင်ပြန်သွားသည် ။ အဘချို အိမ်သို့ ရောက်မလာသေးသူများ၏အိမ်သို့ တအိမ်တက်ဆင်း သွား၍ သာဂိသည် လူကြီးများကို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ပြောဆိုဆက်ဆံနေကြောင်း ၄င်းမသာကိုလည်း ငါးရက်ထား၍ဖဲဝိုင်းထောင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း မိမိရွာလူကြီး ကိုပင် မခန့်လေးစားလုပ်၍ဖီဆန်နေကြောင်းများကို ချဲ့ထွင်ပြောကြားပြီး စည်းရုံးပါသည်။ အတော်များများက သာဂိအကြောင်းရော ယောက်မကြီးအကြောင်းကိုပါသိနေကြ၍မယုံကြည်သော်လည်း အချို့ကတော့ ဒီကောင်လေးကလဲ ဆိုးလိုက်တာ ဟုကောက်ချက်ချပြီး အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ စသည်ဖြင့် ပြန်လည်မေးမြန်းကြပါသည်။ ထိုအခါယောက်မကြီးက ဒီကောင့်ကိုနိုင်တာ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော် တပါးပဲရှိတယ်၊ ဒီတော့ ဆရာတော်ဆီမှာ သွားလျှောက်ထားရမယ်ဟု ပြောသည်။ ထို့ကြောင့်ယောက်မကြီး သည် ၄င်း၏ စကားကိုနားယောင်သူအားလုံးနှင့် အတူ တက်ကြွသောခြေလှမ်းများနှင့် ရွာဦးကျောင်းသို့ချီတက်ခဲ့ကြပါသည်။ ယောက်မကြီးတို့မှရွာဦးကျောင်းသို့ချီတက်နေစဉ်သာဂိကလည်း မိမိ၏နွားကျောင်းဘက်သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို အဘချို၏ကိစ္စအား ဝိုင်းဝန်းကူညီကြရန် မေတ္တာရပ်ခံလိုက်သည်။ နွားကျောင်းသားများအားလုံးကလည်း သာဂိပြောလျှင် နှစ်ခါပြန်ပြောစရာမလိုပဲ အားလုံက လက်ခံကြသည်။သာဂိသည် အကိုလေးယောက်အား စကားပြောဖို့ရန်ခက်ခဲနေသော်လည်း ပြောမှဖြစ်တော့မည် ဖြစ်သောကြောင့် ၄င်းကိစ္စအားဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ရန်ပြောလိုက်သည်။ အကိုများအားလုံးကလည်းသဘောတူပါသည်။ ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည် ပြောဆို ကြသည်။ အဘချိုကို အကြောင်းပြု၍ ငယ်စဉ်တောင်ကျေးကလေးဘဝကပင် ဟုတ္တိပတ္တိ စကားမပြောဖြစ်ခဲ့ကြသော သာဂိတို့ညီအစ်ကိုများ ရင်းနှီးမှုရလာ၍ တဖြည်းဖြည်း စကားပြော ဖြစ်လာကြသည်။ သာဂိ၏ မိဘများဖြစ်ကြသော ဦးသာလှနှင့်ဒေါ်ရင်မှုန်တို့ကလည်း သာဂိ၏ လုပ်ဆောင်ချက် ကိုသဘောကျထောက်ခံသည်။ ဦးသာလှ၏ သာဂိကိုကြည့်သည့်အကြည့်က ငါ့သားမှန်တယ် ဆက်လုပ် အဖေတို့လည်းဝိုင်းလုပ်မယ် ဘာမှ အားမငယ်နဲ့ဆိုသည့် အကြည့်မျိုးဖြစ်သလို၊ ဒေါ်ရင်မှုန်ကလည်း ငါ့သားမှာဒီလိုစိတ်ဓါတ်မျိုးရှိလို့အမေဂုဏ်ယူပါတယ် ဟူသောအကြည်မျိုးနှင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သာဂိဦးဆောင်သော နွားကျောင်းသား အုပ်စုက အဘချို၏အလောင်းကို ရေချိုးပေးကြသည်။ သာဂိ၏အကိုများနှင် ၄င်းတို့၏အပေါင်းအသင်းများကလည်း ဧည့်သည်များလာလျှင် အရိပ်အာဝါသ ရရှိဖို့အတွက်ဝါးများ သက္ကယ်များ သယ်ယူကြသည်။ ဆောက်လုပ်ကြသည်။ ဦးသာလှနှင့်လူကြီးပိုင်းများက အဘချိုအတွက် အခေါင်းရိုက်ကြသည်။ အခေါင်းတင်ရန် လင့်စင်ထိုးကြသည်။ ဒေါ်ရင်မှုန်နှင့်မမြတို့ မိန်းကလေးအုပ်စု ကအဘချိုကိစ္စကိုဝိုင်းဝန်းလုပ်အားပေးကြသူအားလုံး စားဖို့သောက်ဖို့ ချက်ပြုတ်ရန် တာဝန်ယူကြသည်။ သာမန်အားဖြင့်လူသားအားလုံးသည်ကောင်းမှုကို ပြုချင်ကြသည်။ ရှေ့ဆောင်ဦးရွက် ကောင်းတယောက်၏နောက်သို့လိုက်ဖို့လဲ ဝန်မလေးကြ။ သို့သော် သာဂိလို လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည်ကို လုပ်မယ် ဖြစ်အောင်လုပ်မယ် ဟူသောစိတ်ဓါတ်ဖြင့် ရဲရဲပြောရဲရဲလုပ် နိုင်သူများရှိဖို့လိုသည်။ အဘချိုကိစ္စ၌လည်း သာဂိက ဦးဆောင်၍ပြောသင့်ပြောထိုက်သည်များကိုပြော၍လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည် များကို လုပ်လိုက်သောကြောင်၎င်းနောက်သို့မိဘများ အကိုများ သူငယ်ချင်းများအပြင် ၄င်းတို့၏ ဆင့်ပွား အပေါင်းဖော်များပါ သာဂိ၏ဦးဆောင်မှုနောက်သိုကလိုက်ပါခဲ့သည်မဟုတ်ပါလော။ ဒေါ်ရင်မှုန် တို့အဖွဲ ရွာဦးကျောင်းသို့သွား၍ အိုးခွက် ပန်းကန်များကိုသွားယူသော အခါ၌ ဆရာတော်ကြီးနှင့် ယောက်မကြီးတို့အုပ်စုများ စကားပြောနေသည်ကိုတွေ့၏။ ထိုကြောင့် ဝင်မရှုပ်ချင်သော ဒေါ်ရင်မှုန်က သူတို့အဖွဲ့ရှင်းသွားမှကျောင်းပေါ်တက်၍ ဆရာတော်အားလျှောက်ထားလိုသဖြင့် အပေါ်မတက်သေးပဲ အောက်မှပင်စောင့်ဆိုင်းနေကြ၏။ သို့သော် ဆရာတော်က အားလုံးကို အပေါ်သို့တက်ခဲ့ရန် အမိန့်ရှိလိုက်၍ ဒေါ်ရင်မှုန်တို့အုပ်စု အပေါ်သို့တက်သွားကြ၍ ဆရာတော်အားဦးခိုက်ပြီးသင့်တင့် လျှောက်ပတ်သောနေရာ၌ပင်ထိုင်နေလိုက်ကြ၏။ ယောက်မကြီးတို့အဖွဲကတော့ မကျေနပ်သော အကြည့် များနှင့်ကြည့်ကြသည်။ ဆရာတော်က ပကတိ ငြိမ်းအေးမှုအပြည့်ဖြင့် အေး ဒီမှာ ဒကာမြင့်အောင်တို့လူကြီးများအပိုင်းကတော့ ဒကာချိုရဲ့ကိစ္စကို ချက်ချင်းသင်္ဂြိုဟ်ပြီး အေးအေးဆေးဆေးပဲ ပြီးလိုက်ချင်တယ်..အကျယ်မချဲ့ချင်ကြဘူးလို့လာလျှောက်ကြတယ်…နောက်ပြီးသာဂိကလည်းငါးရက်ထားပြီး ဖဲဝိုင်းထောင်မယ်လို့ ပြောနေကြတယ် ဟုမိန့်လိုက်စဉ် ဒေါ်ရင်မှုန်ကဦးမြင့်အောင်တို့ အား အလွန်စိတ်ဆိုးလွန်းလှ၍ မိမိသားသည် ဖဲဝိုင်းထောင်ရန် မစီစဉ်ထားကြောင်းဘယ်နှစ်ရက်ထားမည်ကိုလည်း လုံးဝမပြောရသေးကြောင်းနဲ့အဘချိုသည် လူသားတယောက်ဖြစ်၍လူသားတယောက်ကို ပစ်စလက်ခတ် မလုပ်စေချင်ရုံသက်သက်ဖြစ်ကြောင်း ပြီးတော့ သာဂိသည် အဘချိုအဆုံးခင် ကတည်းက အိမ်မှာ မနေပဲ အဘချိုထံ၌သာ သွားရောက်နေထိုင်၍ ပြုစုပေးခဲ့ကြောင်းစသည်တို့ကို ပြောမည်ဟုတ် မောင်းတင်လိုက်စဉ်မှာပင် ဆရာတော်က ဒေါ်ရင်မှုန်အား လက်ကာပြ၍ …ဘုန်းဘုန်း အားလုံး နားလည်ပါတယ် ဒကာမကြီး သာဂိလုပ်တာမှန်တယ် အဲ့ဒိနေ့မှာဘုန်းဘုန်းကိုယ်တိုင်ပါ သင်္ချိုင်းထိအရောက်လိုက်ပို့ပြီးတော့ ရေစက်ချမယ်လို့သာဂိကိုပြောလိုက်ပါ…အခု အိုးခွက်ပန်းကန်တွေ လာငှားတာမဟုတ်လား…ယူသွားကြလုပ်စရာရှိတာဆက်လုပ်ကြ ဟုမိန်လိုက်သည်။ ဒေါ်ရင်မှုန်ကလည်း မိမိသား၏လုပ်ရပ်ကို ဆရာတော်ကြီးကပါထောက်ခံသည် ဟုသိရ၍ မှိုရသောမျက်နှာမျိုးဖြင့် ဦးသုံးကြိမ်ချပြီး အိုးခွက်ပန်းကန်များထားရာ စတိုခန်းထဲသို့ဝင်သွားပါလေတော့သည်။ ဆရာတော်မှဆက်လက် ဦးမြင့်အောင်တို့ ဘက်လှည့်ပြီး အဲ့ဒိကိစ္စမှာ ဒကာမြင်အောင်က ကုန်ကျစရိတ်သုံးချိုး တချိုးထည့်ဝင်ရမယ်..ဒီဘဝမှာ ကံဆိုးလွန်းလို့ သူများမလုပ်ချင်တဲ့ ရွာလူကြီးအလုပ်ကိုလုပ်ရတယ် နောက်ဘဝမှာ ဒီဘဝမျိုး ဘယ်တော့မှ မရောက်အောင်လို့ဆုတောင်းစေတနာကောင်းကောင်းထား ကြားလား..ဒကာမြင့်အောင် ဟု မိန့်ပြီးအခန်းထဲသို့ပြန်ဝင်သွားသည်။ ဦးမြင့်အောင်တို့အုပ်စုမှာလည်း မိမိတို့စကားမအောင်၍ ရှက်သူကရှက်ဦးမြင့်အောင် စကားကို ယုံမိ၍ ဆရာတော်ကြီး ရဲ့ ငြိုငြင်မှုကိုခံရလေပြီဟု စိတ်မကောင်းဖြစ်သူကဖြစ်နေကြပါသည်။ ဦးမြင့်အောင်ခေါ် ယောက်မကြီးကတော့ အားလုံးကိုသူမဟုတ်သလို သဘောထားပြီး အဟန့်အဟန့်ဟုချောင်းဟန့်ပြီး အားလုံး ဒေါ်ရင်မှုန် တို့သယ်မဲ့ အိုးခွက်ပန်းကန်တွေကို ဝိုင်းသယ်ကြ ဟု လုံးဝမရှိသော သြဇာသံကိုဖြစ် ညှစ်ထုတ်၍ပြောပါသည်။ ရွာသားအချို့ကတော့ ခင်ဗျားမပြောလဲ သယ်မှာပါဗျာ ..စောစော စီးစီး အိမ်လာခေါ်ပြီး စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဗျာ …ခင်ဗျားဘယ်လိုလူမှန်းကို မသိဘူး ဟု ရွတ်ဆိုညီးတွားကြလေတော့၏။
ဆက်လက်ရေးသားပါဦးမည်။ ……………………ရေးသားသူ။ ။နန်းရှင်
ယောက်မကြီးအကြောင်းလဲ..စိတ်ဝင်စားသား..ဘာမှနားမလည်ပဲ အဖားကောင်းလို့လူကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာ.
ဖတ်ပြီး ဘာမှမပြောခဲ့ရင် အားပေးမဲ့လူမရှိဘူးထင်ပြီး အားယုတ်သွားမှာဆိုးလို့ ..
ဖတ်ရတာ.. တော်တော်ရှည်တယ်..တစ်မေ့တမောပဲ…. :D
သာဂိက ရတဲ့နာမည်နဲ့ တော့ လိုက်ဖက်ပေါ့မလား။ဆက်ရန်ပေါ့နော် နန်းရှင်ရေ??
ဒီပို့စ်ထဲက သဂျီးက တော်တော်မလွယ်တာဘဲ။ နည်းနည်းမွှေလည်း ပြသနာတက် များများမွှေလည်း ပြသနာတက်ဆိုရင်တော့ ရွာသားတွေဒွတ်ခရောက်မယ်။ နောက်ပီး လူသေရင် ၇ ရက်မပြည့်မချင်း မကျွတ်သေးဘူးဆိုတဲ့ အယူကမှားကြောင်းအခုမှသိရတယ်ဗျာ။ တန်ဖိုးရှိပါတယ်။